Anyị na-eme doro anya ike maka ụwa
email Nkwado sales@nofuelpower.com
Kpọtụrụ ngwa iwu
3TB Main kọntaktị
3TF World Series Contact ngwa iwu
ABB AF Contact ngwa iwu
EH Series Contact ngwa iwu
Sirius 3RT Contact ngwa iwu
TeSys Contact ngwa iwu
MC ụdị Magnetik contactors
A akara contactors
Anya Purpose Contactor
EH usoro contactor
IEC Contactor na Mankeumman Edepụtara
Ọdụdọ Car Nchaji
EV Nchaji ngwa
EV Nchaji Points
EV Nchaji Wallbox
3RT contactor eriri igwe
3TF contactor eriri igwe
EH contactor eriri igwe
Motor circuit Oké mmali GV2ME
Motor circuit Oké mmali GV2P
MS116 Manual moto EBIDO
3UA bufee agba anọ
LRD thermal bufee agba anọ
bufee agba anọ na Mankeumman Edepụtara
Push button & Swtiches
site ha na 18-09-12
Nofuel ga-esonye 2018 Hong Kong mgbụsị akwụkwọ Electronics Fair. The mma bụ a ọkachamara na mba electronics ngosi. Ọ bụrụ na ị nwere mmasị na ngwá electronic, na-anabatanụ gị gaa na anyị ụlọ ndò na ngosi na-ekwu okwu nkọwa ndị ọzọ. The ozi bụ ndị ngosi nkọwa: Ngosi: HKTDC Hong Eltekọn ...
Nofuel bụ Gbanwee ochie anyị Logo nke eji na ahịa maka 6 afọ na New Logo
Nofuel ịga IAS China International Industry ngosi 2018
Profile of IAS Dị ka a ahia show banyere ulo oru na akpaaka n'okpuru CIIF, IAS bụ mba omume nke Industrial akpaaka Solutions, Production na Usoro akpaaka, Ọdụdọ Systems, Industrial IT & Software na Microsystem Technology. The ịga nke ọma nke gara aga sessions ana achi achi ...
site ha na 18-08-23
HVAC kwesịrị i nwere ike ijide n'aka na ị na-na-edu ngwaahịa na-enweghị atụ ọrụ. Anyị Air Conditioning contactors na relays ga-enyere gị aka HVAC akara usoro.
Residential na Small Business Products
Site nkecha switches na n'oghere ya, ka ịrụ ọrụ nke ọma n'ụlọ akara ngwọta, na ngwa-ngwa-odori electric ụgbọala chaja, anyị anapụta ọhụrụ etoju nke ọhụrụ na mma. Nofuel ana achi achi ndụ bụ na maka ụlọ obibi na obere ulo oru.
Nofuel ngwaahịa ejere na Solar ike maka PV Inverters, PV combiner igbe hazi na DC SPD, 1500V fuuz ,, DC Contactos na AC Nkesa Box isi eji na Residential na Commercial n'elu ụlọ oru ngo 10KW ka 200KW
A kpamkpam ọgbọ ọhụrụ nke circuit Oké mmali, contactors, bufee relays na ibu feeders na asaa nha ruo 250 kW dị njikere maka ojiji na panel na modular echichi nke panel ụlọ dị mfe. Mpi akara ogwe maka North American ahịa na Mankeumman 508 na Mankeumman 1077 izute UL5 ...
Ọkachamara circuit Oké mmali, moto njikwa, switches, akara panel, EV Nchaji na akụkụ. Anyị na-raara nye enye ahịa anyị na elu àgwà ngwá na ọrụ na a bara oké uru.
Nofuel bụ Gbanwee ochie anyị Logo nke eji ...
Nofuel ịga IAS China International ...